Rubatsiro Kune Vari Kushungurudzwa Mudzimba—Mwari ane hanya newe.
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikongo ya Leta Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kyangonde Lari Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Rarotongan Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Rubatsiro Kune Vaya Vari Kushungurudzwa Mudzimba
“Pasi rese vanhu vakawanda vari kurova vakadzi. Idambudziko rakaita sechirwere chinopararira nekukurumidza. Uye zvinokosha kuti patorwe matanho ekumisa dambudziko iri,” rinodaro sangano reWorld Health Organization. Sangano iroro rinofungidzira kuti zvinenge zvikamu 30 kubva muzana “zvevakadzi vese vakambodanana nemumwe munhu vakamborohwa kana kuti vakamanikidzwa kuita zvebonde,” nemumwe wavo. Uye UN yakati mune rimwe remakore achangobva kupfuura, vakadzi vanenge 137 vaiurayiwa zuva rega rega nevanhu vavaidanana navo kana kuti nemunhu wemumhuri. *
Manhamba angaratidza kukura kwakaita dambudziko rekushungurudzwa mudzimba, asi haagoni kutitsanangurira kurwadziwa kwevaya vanenge vachishungurudzwa.
Wakamboshungurudzwa mumba here? Kana kuti une waunoziva ari kusangana nedambudziko iri here? Kana aripo, ona zvinhu zvinotevera zvinobva muBhaibheri zvinogona kumubatsira.
Kana mumwe wako achikushungurudza haisi mhosva yako
Unogona kuwana rubatsiro
Mwari ane hanya newe
Kushungurudzwa mudzimba kuchapera
Ungabatsira sei munhu anenge achishungurudzwa mumba?
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Mumwe nemumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.”—VaRoma 14:12.
Yeuka izvi: Munhu ari kukushungurudza achazvidavirira kuna Mwari.
Kana mumwe wako achikupa mhosva yekukushungurudza kwaari kuita, akarasika. Madzimai anofanira kudiwa kwete kushungurudzwa.—VaKorose 3:19.
Dzimwe nguva zvinoitwa nemunhu anokushungurudza zvinogona kukonzerwa nekukanganisika pfungwa, kukurira mumhuri yaiitwa zvemhirizhonga kana kuti nekunyanya kunwisa doro. Kunyange zvakadaro anozvidavirira kuna Mwari nemabatiro aanokuita. Uye ndiye anofanira kuita zvinenge zvichidiwa kuti achinje maitiro ake.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kana vanhu vanopa mazano vakawanda zvinhu zvinobudirira.”—Zvirevo 15:22.
Yeuka izvi: Kana uchinzwa usina kuchengeteka kana kuti usiri kuziva kuti woita sei, vamwe vanogona kukubatsira.
Chii chingaita kuti ude kubatsirwa nevamwe? Kana uchishungurudzwa, unogona kuva nepfungwa dzakawanda. Zvingakuomera kusarudza zvekuita nekuti unenge usiri kuziva kuti ndezvipi zvinonyanya kukosha pazvinhu zvinotevera:
Zvakanakira vana vako
Kuda kwaunoita mumwe wako
Chido chekuramba muri mese kana mumwe wako akachinja maitiro ake
Saka unogona kuvhiringidzika zvekushaya kuti woita sei. Ungawana kupi rubatsiro?
Shamwari yaunovimba nayo kana mumwe wemumhuri anogona kukubatsira uye kukunyaradza. Kutaura nemumwe munhu ane hanya newe kunogona kukubatsira chaizvo.
Kufona panhamba dzehotline dzemasangano anobatsira vanenge vachishungurudzwa mudzimba kunogona kuita kuti ukurumidze kuwana rubatsiro. Vaya vanenge vari pamahotline aya vanogona kukubatsira kuti uzive zvekuita kuti uzvichengetedze. Kana mumwe wako akabvuma kuti ane dambudziko uye achida kuchinja, vaya vanenge vari pamahotline vanogona kumubatsira kuziva matanho ekutanga aanofanira kutora.
Pane vamwe vanogona kukubatsira kana uchida rubatsiro nekukurumidza. Vanogona kuva vanachiremba, manesi kana vamwewo vakadzidziswa kubatsira.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Jehovha * ari pedyo nevaya vakaora mwoyo; anoponesa vaya vakasuruvara.”—Pisarema 34:18.
Yeuka izvi: Mwari anovimbisa kukubatsira.
Jehovha ane hanya newe zvikuru. (1 Petro 5:7) Anonzwisisa mafungiro ako uye manzwiro aunenge uchiita. Anogona kukunyaradza achishandisa Shoko Rake Bhaibheri. Uye anoda kuti unyengetere kwaari. Paunonyengetera kwaari unogona kumukumbira kuti akupe uchenjeri nesimba kuti ukunde dambudziko rako.—Isaya 41:10.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Mumwe nemumwe achagara pasi pemuzambiringa wake nepasi pemuonde wake, uye hapana achaita kuti vatye.”—Mika 4:4.
Yeuka izvi: Bhaibheri rinovimbisa kuti munguva pfupi iri kuuya munhu wese achagara pamba pake pasina chiri kumunetsa.
Jehovha Mwari ndiye chete anogona kugadzirisa zvachose matambudziko edu ese. Bhaibheri rinovimbisa kuti: “Achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa.” (Zvakazarurwa 21:4) Panguva iyoyo kunyange zvinhu zvakaipa zvinenge zviri mupfungwa zvichapera pazvinenge zvichitsiviwa nezvinhu zvakanaka. (Isaya 65:17) Iri ndiro ramangwana rakanaka raunovimbiswa neBhaibheri.
^ ndima 1 Nyaya ino iri kutaura nezvevanhukadzi vanenge vachishungurudzwa mudzimba, asi pfungwa dzakawanda dzirimo dzinoshandawo kuvanhurume vanenge vachishungurudzwa.
^ ndima 25 Jehovha ndiro zita raMwari sezvinotaurwa neBhaibheri.
Zvaunogona kuita kuti ubatsire munhu anenge achishungurudzwa mumba
Une munhu waunoziva here ari kushungurudzwa mumba? Kunyange usina kudzidziswa kubatsira vanhu vakadaro, unogona kumubatsira. *
Nyatsomuteerera nemwoyo wese. (Jakobho 1:19) Muudze kuti unoda kumuteerera, asi usamumanikidza kutaura. Ita kuti ave nechokwadi chekuti uri kubvuma zvaari kutaura.—Zvirevo 20:5.
Rimwe sangano rinobatsira vanenge vachisangana nemhirizhonga mudzimba rinoti: “Kuti akuudze zviri kuitika, anenge atoratidza ushingi chaihwo. Kakawanda kacho [vanhu vanoshungurudzwa] havadi kutaura nezvazvo kana kuti havatauri zvese. Uye kashoma kuti vataure nyaya yekunyepa kana kuwedzeredza zvinenge zvakaitika. Zvinogona kukuomera kubvuma kuti mumwe munhu waunoziva angashungurudza mumwe wake. Asi zvinoitwa nemunhu wacho kana ainewe zvinogona kusiyana nezvaanoita kana aine uya waanoshungurudza.”
Mukurudzire nezvaunotaura. (1 VaTesaronika 5:11) Taura naye nenzira inoita kuti anzwe kuti anokosha. Muudze kuti une hanya naye. Muyeuchidze nezvezvinhu zvakanaka zvaanoita. Mukurudzire kuti atsvage rubatsiro.
Muudze kuti unogona kumubatsira. (Zvirevo 17:17) Mubatsire pane zvimwe zvinhu zvakadai sekumbosara nevana vake paanenge asipo kana kumubikira zvekudya. Ona kuti anoziva here zvekuzoita kana zvikaitika kuti zvinhu zvaoma, uye kuti ane kwaangaenda here kwakachengeteka.
Mubatsire kuona kuti anokwanisa kusarudza ega zvekuita. (VaGaratiya 6:5) Muudze zvimwe zvinhu zvaangada kuziva uye zvimwe zvinhu zvaanogona kuita. Asi usamusarudzira zvekuita.
^ ndima 41 Kana uri munhu wechirume uchiziva nezvemunhukadzi angada kubatsirwa, mukurudzire kuti abatsirwe nemunhukadzi waanovimba naye.
Bhaibheri rinogona sei kubatsira kunyange vaya vanonzi havaiti panyaya dzokuda kurwisana nevamwe?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Rubatsiro Kune Vaya Vari Kushungurudzwa Mudzimba